トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny niandohan'ny ny volana - ny fanombohan'ny iray pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny endri-javatra (na fe-potoana famerenana-misokatra amin'ny fiainana)
※ Raha toa ka efa fotsiny zatra ny handeha ho fironana ho an'ny manontolo indostrian'ny hampifaly
pachinko efi-trano ao an-boky, nefa tsy mety ho nahatsikaritra, tao an-pachinko efi-trano, ary ny fotoana sy mora lalao, dia hisy ary raha tsy . Raha niresaka momba ny toerana fa na ny fotoana ny lalao, mba hahafantatra izany, Mivoaka Ilaina ny hijery ny raharaham-barotra drafitra ny pachinko trano izy.
re ao ihany koa ny orinasa rehetra, misy zavatra antsoina hoe drafitra ihany koa ny raharaham-barotra ao amin'ny pachinko efi-trano, koa na aiza na aiza ao amin'ny pachinko efi-trano, dia miasa isika, miorina amin'ny drafitra izany raharaha izany. Ohatrinona ny tombom-barotra lehibe, ary ny fandidiana drafitry ny toerana sy ny fomba sitrana ianao dia afaka mahita ny maro pachinko efi-trano izay mpitoetra tamin'ny volana voalohany. Io no raharaha drafitry ny iray volana, mandra-pahatongan'ny faran'ny volana hatramin'ny volana voalohany.
mba hanatratra araka izay azo atao izany raharaha izany drafitra, dia ny fotoana ny fotoana sy ny famoriam-bola ny zava-nitranga, mandehana nanapa-kevitra mitovitovy. Mazava ho azy, satria drafitra, dia mety tsy miasa. Kosa, ny tena zava-misy ny toy izany afa-tsy izay tsy miasa dia avy amin'ny pachinko trano izy. Ao
, ny fiandohan'ny volana pachinko efi-trano dia, inona no karazana raharaham-barotra dia ny handeha ho any, te-hahita. Ny niandohan'ny volana pachinko parlors, dia manana mahagaga malina raharaham-barotra. Hatrany am-piandohana ny volana, satria tsy afaka hamoaka ny fahampiam. Nail fanitsiana, ny fivarotana matetika fantsika fanitsiana tamin'ny fotoana dia ny fototra, ny azo inoana fa tonga mba hizaha ny antontan-kevitra mety hahatonga anao latabatra kely hanenjanany.
slot Toy izany koa, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, nametraka 1, satria azo inoana fa avy ny latabatra, manana ny Uchinaoshi na ny toy izany ao amin 'ny toe-javatra. Ny niandohan'ny ny volana ary any pachinko parlors, pachinko na slot, fisorohana Desugi tsy nampoizina, dia Awayokuba ny fotoana miezaka ny tahiry drafitry ny raharaham-barotra lehibe na mihoatra ny tombom-barotra.
Noho izany, dia ho lasa mora ho atao varotra.
mazava ho azy, dia tsy midika fa ho hifindra ho toy ny milina Nieritreritra aho, dia misy ihany koa ny tranga izay hivoaka. Na izany aza, na dia toy izany, be dia be tsy misy na hanenjanana kokoa feno fantsika, misy ihany koa ny mahita fa mba hitsangana. Total sy Rehefa, pachinko parlors ny gazy-nitondra olana tany am-piandohana ny volana dia mety ho ambany izy. Kanefa, mba hiarovana ny ara-dal?na haingana raharaham-barotra.
eto, misy teboka Te-hifantoka.
izany, ny fiandohan'ny volana pachinko efi-trano dia ny hoe ara-dal?na fandraharahana toetry ny toeram-pivarotana. Raha tsy misy na dia vonona ny hametraka ny teo, fa ny toa azy ny toerana toy ny tsy misy saina mba hanamafy orina ny fanarenana mandra-pahatongan'izay. Ny olona rehetra ny fivarotana izay handeha hilalao fanitsiana ara-dal?na sy ny toe-javatra fantsika zava-misy, misy ihany koa ny fotoana izay toa mazava tsara. Ny niandohan'ny ny volana izany, dia afaka hatao hoe ny fotoana no tsara, izay efa hita indrindra mba hahafantatra ny toeram-pivarotana. Na dia ao amin'ny
fantsika fanitsiana, raha jerena amin'ny alalan'ny iray volana, indrindra teo am-piandohan'ny volana ny toe-javatra, misokatra izany, mahatonga mora kokoa ny fitsarana no tightened. Na dia izany aza, satria ny entona-fivarotana avy Tsy ampy fahasamihafana, dia ny vokatry amin'ny fampiasam-bola be loatra, dia ny fotoana izay tsy azo kevitra. Ny niandohan'ny ny volana, tsy misy lalao lehibe, feno fanoloran-tena bebe kokoa ho anao izany mba hitandrina ny pachinko parlors.
mazava ho azy, satria lehibe ny vanim-potoana dia tsy fihetsika fa salama, raha eto Manompoa, mety indraindray miezaka namely. Hisambotra ny fiandohan'ny volana, ny lalao fotoana iray volana, dia miezaha mamantatra hentitra. Izany dia ny fotoana izay tsy afaka ny ho mendrika. Ny niandohan'ny ny volana, tsy misy lalao lehibe, feno fanoloran-tena bebe kokoa ho anao izany mba hitandrina ny pachinko parlors.
mazava ho azy, satria lehibe ny vanim-potoana dia tsy fihetsika fa salama, raha eto Manompoa, mety indraindray miezaka namely. Hisambotra ny fiandohan'ny volana, ny lalao fotoana iray volana, dia miezaha mamantatra hentitra.